Kwihlabathi lanamhlanje ledijithali, sonke sivile malunga nezibonelelo zokuvula iwebhusayithi, ukudala ubukho be-intanethi kunye nokuguqula iindwendwe zesayithi zibe ngabathengi.
Ukuqala iwebhusayithi kuyonwabisa kodwa sisiqalo nje sokukhuthaza ishishini kwi-Intanethi. Ukuqinisekisa ukuba inokufumaneka kwiinjini zokukhangela kunye nokuyifumana phezulu kweziphumo zikaGoogle kulapho umsebenzi onzima uqala khona.
Nali ibali elikhawulezayo kuwe. Imalunga nomnini-shishini obeka iinyanga kunye nexesha lokuzama kwiwebhusayithi entsha shiny ukukhuthaza iinkonzo zayo kunye neemveliso. Ngaphandle kwemizamo elungileyo kunye neenzame zokunyusa ukugcwala, iwebhusayithi ihlale isezantsi kweerenjini zokukhangela kwaye utyalomali aluphumelelanga ukuluguqula lube kukunyuka kwentengiso.
Ngaba uyavakala? Ngombulelo, akufuneki ukuba njalo. Ngokusetyenziswa kwe-SEO kunye nokuhlaziywa kwewebhusayithi, iwebhusayithi inokuguqulwa ukuze ibenqaku eliphambili kuphando lwe-Intanethi.
Njengazo zonke izinto ebomini, ukusebenzisa ubuchule obuncinci kungahamba indlela ende xa kuziwa kwi-SEO. Cinga ngomehluko phakathi kokusebenza kwindawo yokuzivocavoca wedwa okanye nomqeqeshi wakho. Iziphumo phantse zihlala zingcono, zikhawuleza kwaye zihlala ixesha elide xa usebenza kunye nomqeqeshi. Indlela efanayo inokusetyenziselwa ukwenza ubukho be-intanethi obuyimpumelelo ngokungenisa inkxaso ye-SEO kunye neengcali zokuthengisa ukunceda ishishini lakho ukuba linyuke ngenqanaba lenjini yokukhangela.
I-Semalt yakhiwe liqela leengcaphephe ezinjalo kwaye ibisoloko inceda abathengi kwihlabathi liphela ukuphakamisa iprofayili yabo kwi-intanethi ngaphezulu kweshumi leminyaka. Makhe sijonge ukuba ngoobani kwaye benza ntoni.
Ngamafutshane, uSemalt yiArhente egcweleyo yeDijithali ngenjongo yokwenza amashishini akwi -Intanethi aphumelele. Ngeenkampani eziseKyiv, eUkraine, uSemalt usebenza nabathengi kwihlabathi liphela ngokunikezela nge-SEO ukukhuthaza, ukuphuculwa kwewebhu kunye neenkonzo eziphambili zohlalutyo, kunye nokudala umxholo wevidiyo.
I-Semalt liqela elingaphezulu kwe-100 le-IT yokudala kunye neengcali zokuthengisa - kunye nezilwanyana zasekhaya iTurbo-eneengcambu zayo zibekwe kwitekhnoloji yedijithali. Ngokusebenza kunye nokwabelana ngeminyaka yobungcali, iqela leSemalt lidale isisombululo sokuqala se-SEO ukunceda abathengi bafikelele kwezona zikhundla zikhulu kwi-Intanethi- iziphumo eziphambili zophando lukaGoogle.
Njengaye nabani na osebenzisa i-intanethi uya kwazi, ukubonakala kwiindawo eziphambili zeziphumo zenjini yokukhangela yigolide ye-Intanethi. Ayisiyonyusi ukubonakala kwaye yandise ukugcwala kwiwebhu, kodwa kumashishini akwi-Intanethi, inokukhokelela ekutsaleni abathengi abanokubakho kunye nokunyuka kwentengiso.
Isebenza njani ke? Ngokusisiseko, kukho iindlela ezimbini onokukhetha kuzo: I-AutoSEO kunye ne-FullSEO. Kodwa okokuqala, kwabo kuni abangaqinisekanga ngentsingiselo ye-SEO, nantsi ikhosi yengozi encinci.
I-SEO imele ukuSebenza kweNjini yokuKhangela. Oko kuthetha ukuba iinjinjini zokukhangela ezinjengeGoogle zinokufumana inqaku lakho, ibhlog, okanye iwebhusayithi phakathi kweqela labantu elinomxholo we-intanethi kwaye ubeke ngaphakathi kwabo kwiziphumo zokukhangela. Ukuqulunqwa komxholo ngakumbi kwi-algorithms yenjini yokukhangela, kuya kuthi ke kuphakame kwiziphumo eziza kubonakala.
Iyavakala ilula kodwa ii-injini zokukhangela zihlala zitshintsha iialgorithms zazo, okuthetha ukuba inokuba zisebenze kunyaka ophelileyo, ngekhe kungasebenzi kulo nyaka. Kukho amanqaku angenakubalwa afumaneka kwi-Intanethi neengcebiso zendlela yokwenza ngcono i-SEO, kodwa esinye sezona zixhobo zisebenzayo kukusebenzisa amagama aphambili kwiwebhusayithi. Emva koko, ufuna ukucinga malunga nee-meta tags, ukuphucula iintloko kunye nemifanekiso, ukunxibelelana ukwakha kunye nokudala umxholo owahlukileyo.
Konke oku kungasentla kuthatha ixesha kunye nokucwangciswa, kwaye kubanini bamashishini abaninzi, ixesha lixabisekile (okanye ngamanye amaxesha into engaqhelekanga). Kulapho iinkonzo ezinjenge-AutoSEO kunye ne-FullSEO zinokunceda khona.
I-AutoSEO sisixhobo esenzelwe amashishini amancinci afuna ukonyusa isiza kodwa angangaqhelananga ne-SEO kwaye akafuni kwenza utyalomali olukhulu de babone iziphumo zokwenyani.
Inkonzo iqala ngengxelo emfutshane malunga nenqanaba lewebhusayithi, elandelwa luhlalutyo olupheleleyo yingcali ye-SEO ukubona iimpazamo kunye nokuchonga ekufuneka kwenziwe. Injineli ye-SEO ke ikhetha amagama abalulekileyo evelisa ithrafikhi afanelekileyo kwiwebhusayithi nakwishishini alikhuthazayo. Emva koko, itekhnoloji yeSemalt iqala ukwakha amakhonkco kwizibonelelo ezinxulumene ne-niche, kunye neesayithi ezikhethwe ngokweminyaka ye-domain kunye ne-Google Trust Rank.
Nje ukuba izixhobo zibekho, u-Semalt ubonelela abathengi ngezihlaziyo zemihla ngemihla malunga nendlela amagama aphakanyisiweyo abekwa ngayo, kunye neengxelo zokuhlalutya rhoqo zokuvavanya ukusebenza kakuhle kwephulo.
I-FullSEO ibonelela ngezisombululo ezihlanganisiweyo ze-SEO kumashishini amakhulu, abantu abaneenkampani ezininzi, okanye abo balungele ukutyala imali encinci ukuze basebenzise iwebhusayithi kunye nokusebenzisa i-SEO.
Inkonzo ye-FullSEO ilandela imigaqo efanayo kwi-AutoSEO, kodwa izisombululo ezicetywayo zisekwe kuhlalutyo olunzulu, kubandakanya ukuphononongwa kwabakhuphisana, kwaye kuqinisekisa ukukhula okugcwala kwiwebhusayithi ngesantya esiphezulu sokuguqula. Isisiseko sisixhobo sokuthumela iwebhusayithi phezulu kwiziphumo zokukhangela zikaGoogle -khawuleza.
Ngokusebenzisa i-FullSEO, iqela likaSemalt liqinisekisa ukuba iwebhusayithi ihambelana ngokupheleleyo nemigangatho ye-SEO. Oku kwenziwa ngokwakha indawo ngaphakathi kunye nokulungisa iimpazamo, njengokudala i-meta tags yamagama aphambili, ukuphucula ikhowudi ye-HTML yewebhusayithi, ukususa izixhumanisi ezaphukileyo kunye nokwenza ngcono ukudibana kwewebhusayithi. Ezinye izibonelelo zephakeji ye-FullSEO zibandakanya uncedo olupheleleyo olusuka kuSemalt kuphuhliso lwewebhusayithi kunye nokudalwa komxholo onobuhlobo we-SEO. Isiphumo sisiphumo esihle sotyalo-mali kunye neziphumo zexesha elide.
Njengoko mhlawumbi uqikelele kwangoku, isitshixo seenkonzo ze-SEO zikaSemalt kukusetyenziswa kohlalutyo ukwenza isisombululo esahlukileyo kumthengi ngamnye. Nangona kunjalo, igama elithi "i-analytics yewebhusayithi" linokuvelisa isiphithiphithi, ke makhe sijonge ukuba lithetha ntoni kwaye lisetyenziswe njani kwa-Semalt.
I-analytics yewebhusayithi sisixhobo esisetyenziselwa ukubeka esweni ukusebenza kakuhle kwintengiso ye-Intanethi, kunye nokulandela umkhondo kwindawo yentengiso yeshishini lakho kunye nabantu abakhuphisana nabo.
Ukubeka iliso rhoqo kubalulekile ekuqondeni ubungakanani obupheleleyo bemakethi yeshishini. Ayincedi nje kuphela ukuseka amagama aphambili e-SEO kwaye igcine iso ekusebenzeni kwabo bakhuphisana nabo, kodwa ikwachaza namathuba amatsha ophuhliso lomkhiqizo kwisithili, okanye iindlela ezintsha zokuhanjiswa kwemveliso.
Iphakheji yeSemalt ibonelela ngokufikelela kuyo yonke idatha yohlalutyo efunekayo ukulandela umkhondo wokukhula kwewebhusayithi kunye nokuchonga naziphi na izithintelo ezinokubakho. Kubandakanya ukuvuselelwa kwexesha langempela, iingxelo zeelebheli ezimhlophe zokubonisa iziphumo kunye nokukhethwa kwedatha oyikhethayo nge-API ye-Semalt. Kukwindleko ephantsi kodwa kuvelisa ingcaciso eluncedo ukunceda ekwaziseni ubuchule be-SEO. Ukusetyenziswa kohlalutyo lwewebhusayithi kuyinxalenye ebalulekileyo iphazili ye-SEO kwaye ngoncedo lweengcali, inokusetyenziswa ukuguqula indawo ibe sisixhobo esisebenzayo seshishini.
Abathengi abonwabileyo beSemalt
U-Semalt usebenze kwiwebhusayithi ezingaphezulu kwe-5,000 kunye noluhlu lwabathengi kwihlabathi liphela nakumashishini aqala kwimpilo kunye nokuba seteknoloji kunye nepropathi. Uninzi lwabathengi abonwabileyo baxela iziphumo ezilungileyo kunye neSemalt rhoqo bafumana ukujonga okuphezulu kuGoogle naku-Facebook.
Omnye wabathengi abonwabileyo ngumthengisi ose-UK osekwe kwi-Intanethi ogqitha kwiintengiso zobusi nobusi. Injongo yayikukuba inkampani ikwindawo ephezulu ye-10 kwiGoogle kunye nokwandisa ukugcwala kwiwebhusayithi. Ngaphakathi kweenyanga ezintandathu zokusebenzisa inkonzo ye-FullSEO, ukugcwala kwabantu kunyuke nge-4,810 yeepesenti, ukutyelelwa iwebhusayithi rhoqo ngenyanga kunyuke nge-12,411 kunye nenani lamagama aphambili kwiGoogle TOP-100 anyuka ukusuka kwi-147 ukuya kwi-10,549. Umxhasi ubonakalisiwe kwibhokisi kaGoogle ethi “Abantu Babuze”, ekongeza ukugcwala kwabantu kwindawo.
Wenze njani uSemalt? Iziphumo zafezekiswa ngokuqala ngophicotho olunzulu lobugcisa bokuchonga iindawo ezifuna ukuphuculwa. Uphicotho lwaye emva koko lwalandelwa sisicwangciso sokuhlaziya iwebhusayithi, njengokuphucula iphepha, ukuhlengahlengisa iwebhusayithi kunye nokudalwa komxholo we-SEO. Emva koko, uSemalt uqalise ukukhuthaza iwebhusayithi njengengxenye yephakeji ye-FullSEO ngokusebenzisa umkhankaso wokwakha ikhonkco. Ezinye, njengoko besitsho, yimbali.
Ngophando olungakumbi lwamatyala abathengi abonwabileyo be-Semalt, tyelela iwebhusayithi apha.
Ngoku ukuba i-SEO kunye nokuhlaziywa kwewebhusayithi kuchaziwe, kunjani ukusebenza noSemalt?
Okokuqala, uSemalt yinkampani yehlabathi ke ukufumana ulwimi oluqhelekileyo akuyongxaki. Amalungu eqela athetha isiNgesi, isiFrentshi, isiTaliyane nesiTurkey, phakathi kwezinye.
Okwesibini, ukuqala nge-AutoSEO kulula ngesilingo seentsuku ezili-14 nge- $ 0.99 nje. Oku kulandelwa kunye nenketho yokukhetha isicwangciso sokusebenza inyanga enye, iinyanga ezintathu, iinyanga ezintandathu okanye unyaka omnye. Yindlela elungileyo yokusampula inkonzo ngaphambi kokutsiba kwi-FullSEO.
Okokugqibela, uSemalt unikezela ngenkxaso yabathengi nge-24/7, okuthetha ukuba naphi na apho ukhona khona, unokuqhagamshelana nelungu leqela ukuze ufumane uncedo kunye neengcebiso. Ungadibana neqela elikwi-intanethi ngokundwendwela iphepha elimalunga nathi malunga newebhusayithi.